Kusoo dhawow Allwin Xirmo
Allwin Pack wuxuu ku yaalaa magaalada Beijing ee dalka Shiinaha, taas oo ah shirkad baakad cunno oo dhammeystiran, kuna takhasustay weelka foornada aluminium, weelasha caaga ah, qaabeynta qaab dhismeedka caaryada iyo horumarinta, farsamada otomaatiga R&D, suuq geynta iyo adeegga macaamiisha oo ka mid ah shirkadda isku dhafan. Saldhigga wax soo saarka Allwin Pack wuxuu ku yaal Hebei, Tianjin, Shandong iyo Guangdong, waxaan haynaa 30,000 mitir murabac oo aqoon isweydaarsi ah oo aan boodh lahayn, oo leh qalab otomaatig ah oo robot toos ah iyo soo kabashada qashinka otomaatiga ah iyo dib u warshadeynta. baaritaanka alaabta ceyriinka ah iyo shaybaarka baaritaanka waxqabadka, shaybaarka naqshadeynta caaryada, waxaan soo saarnay oo aan tijaabinay ku dhowaad kun kun oo wasakhahaasi waxqabadka wanaagsan oo hogaamiye u ah warshadan.
Waxaan u adeegsannaa in kabadan 20 tiknoolajiyada aasaasiga ah ee patent-ka ee aluminium aluminium si loo buuxiyo noocyo badan oo farsamada warshadaha ah
Waxaan u isticmaalnaa alaabada ceyriinka ee aluminium aluminium kuwaas oo ah kuwa guud ee caalamiga ah, bey'adeed u fiican oo tayo sare leh si ay u siiyaan macaamiisha weelal kala duwan oo aluminium ah, ka soo saar aluminium aluminium ah oo loogu talagalay karinta, aluminium aluminium guryaha ah iyo taxane kale oo alaab ah
Ku soo dhawow baaritaanka Allwin Pack
15 sano soo-saare xirfadle ah si loo daboolo baahiyahaaga shakhsi ahaaneed ee alaabada aluminium ee aluminium ah ， SAMBAR BILAASH qiimeyn ah
1.All noocyada faahfaahinta, waa loo habeyn karaa iyadoo loo eegayo baahida macaamiisha. Cabirka iyo qoto dheer ayaa noqon kara xulasho-awood u leh inay buuxiyaan shuruudaha kala duwan. 2. Weelka foornada weelka foornada ee ay ansaxisay FDA iyo KOSHER. Amniga iyo caafimaadka, iyada oo loo marayo nadiifinta heerkulka sare. Sida ay tahay in loola xiriiro ...
Haa, dhib malahan. Hubso in weelku furan yahay, ka hor-tagga kuleylka ballaadhinta iyo qandaraaska qabow oo sababa qarax, ha u isticmaalin waxyaabo caadi ah maacuunta ku jirta foornada microwave, waxaa fiican inaad isticmaasho xirmada diirimaadka kuleylka. 1, iska ilaali inaad xiriir layeelatid filim caag ah: markaad isticmaaleyso filim cusub, kuleylka ...